Madaxdii hore ee Dalka oo loo qabtay Waqti ay ku soo celinayaan Hantida Qaranka. "War-saxaafadeed" - Caasimada Online
Home Warar Madaxdii hore ee Dalka oo loo qabtay Waqti ay ku soo celinayaan...
Madaxdii hore ee Dalka oo loo qabtay Waqti ay ku soo celinayaan Hantida Qaranka. “War-saxaafadeed”
Muqidsho (Caasimada Online) Golaha wasiirada xukuumada Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah kulan xasaasi ah ku yeeshay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Kulanka oo ah mid toddobaadle ah waxa shir guddoominaayay ra’iisal wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon wax yaabaha looga hadlay waxa ka mid ahaa ammaanka iyo qabsashadii magaalada Jowhar ay la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Kulanka oo ay Saxaafadda Bannaanka ka joogtay ayaa aakhirkii waxa laga soo saaray qoddobada soo socda:-
Ugu horreyn waxa shirka warbixin ku aadan guullaha ay Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ka gaareen howlgallada iyo heshiiskii dhanka Gaashaandhigga ee Turkiga iyo Soomaaliya looga dhageystay Wasiirka Gaashaandhigga Mudane C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi oo isagu labadaasi qodob Golaha Wasiirrada faah faahin ka siiyey.